Chizvarwa chechitatu che iPhone SE chinosvika nebhatiri rakakura uye modem nyowani | Nhau dze iPhone
Vazhinji vanomushora asi iye ane vateveri vake, ivo Yechitatu-chizvarwa iPhone SE yakasvika munaKurume 8 kugara. Uye ndezvekuti kune vazhinji vanoda kuve ne iPhone asi vasingade kupfuura nepakati peiyo iyo yakanyanya premium smartphones yevakomana pamutengo weblock. The iPhone SE iphone ine iOS, chimwe chinhu chatova vimbiso, neTouch ID, uye chete 529 euros mune yayo yakachipa shanduro. Uye chimwe chezvinhu zvinonyanya kufadza zveiyi vhezheni itsva ndechekuti Inosvika ne5G uye nebhatiri rine huwandu hwakawanda. Ramba uchiverenga kuti tinokuudza zvese zvese ...
Uye iwe unoziva kuti kumagumo isu hatizive zvese zvese zvemidziyo mitsva kudzamara zvishandiso zvasvika kune vashandisi, kana kanenge kekutanga rombo rekukwanisa kuyedza zvigadzirwa izvi. UYEiye mutsva wechitatu-chizvarwa iPhone SE akapfuura nemumashopu eiyo huru mudziyo "disassemblers", ndosaka tava kuziva kuti iyi itsva iPhone SE ine bhatiri hombe re2018 mAh zvichienzaniswa ne1821 mAh iyo yekare modhi yaive nayo.. Bhatiri idzva rinogona kutibvumira kusvika maawa maviri ekuwedzera ekutamba kwevhidhiyo uye kunyange mamwe maawa e10 ekutamba kwekuteerera, zvose zvichienzaniswa nemuenzaniso wekare.
Uye kwete izvozvo chete, ikozvino isu tinoziva kuti ndeipi modem ine mhosva kune iyo iPhone SE kukwanisa kubatana kune 5G network. Iyi itsva iPhone SE inoisa modem nyowani Qualcomm Snapdragon X57, modem inoita seyakagadzirirwa Apple uye izvo zvishoma zvinozivikanwa. Mufunge, zvinoita kunge modem iyoyo inogumira kumabhendi asingasviki 6GHz, chimwe chinhu chakafanana neicho maPhones asiri anobva kuUnited States tsigiro sezvo achitsigira mmWave mabhendi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone SE » Chizvarwa chechitatu che iPhone SE chinosvika nebhatiri hombe uye modem nyowani
Iyo Apple Studio Display ine 64GB yekuchengetedza ... Chii?